Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » China na Africa jikọrọ aka siri ike megide COVID-19
A na-atụ anya na ọbụbụenyi China na Afrịka ga-aga n'ihu ka imekọ ihe ọnụ na-aga n'ihu n'akụkụ dị iche iche ka e nwechara ogbako ndị minista nke asatọ na-aga n'ihu nke Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) na Dakar, Senegal.
N'ịkọwa ihe nzuzo nke ọbụbụenyi China na Africa ma na-eleba anya na mmepe mmekọrịta ha n'ọdịnihu, o mere ka ịdị n'otu megide ọrịa ahụ pụta ìhè, ime ka mmekọrịta dị irè dịkwuo omimi, ịkwalite mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ichekwa ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi.
Imekọ ihe ọnụ megide COVID-19
"Iji ruo ebumnuche nke African Union setịpụrụ ịgbara pasentị 60 nke ndị Africa ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 ka ọ na-erule 2022, China ga-enye Africa otu ijeri ọgwụ mgbochi ọzọ, nke a ga-enye nde 600 n'efu." .
N'oge kacha sie ike n'ọgụ China na-alụso ọrịa COVID-19 ọgụ, mba Africa na otu mpaghara dịka African Union (AU) nyere China nkwado siri ike. Mgbe COVID-19 wakporo Africa, China wetara mba Africa 50 na AU Commission ọgwụ mgbochi COVID-19.
"China agaghị echefu ezigbo enyi nke mba Africa," Xi kwuru, na-agbakwụnye na China ga-arụkwa ọrụ ahụike na ahụike 10 maka mba Africa ma ziga ndị otu ahụike 1,500 na ndị ọkachamara ahụike ọha na eze na Africa.
N'izu gara aga, e wuchara isi ụlọ nke isi ụlọ ọrụ China na-akwado maka Centlọ Ọrụ Maka Mgbochi Ọrịa na Mgbochi Ọrịa Africa.
Imekọ ihe ọnụ na mpaghara dị iche iche
China ga-eso Afrịka na-arụkọ ọrụ iji gbasaa azụmaahịa na itinye ego, kekọrịta ahụmịhe na ibelata ịda ogbenye, na ime ka mmekorita ya na akụ na ụba dijitalụ na ume ọhụrụ dị ike, Xi kwuru.
China ga-eziga ndị ọkachamara n'ihe gbasara ọrụ ugbo 500 na Africa, soro mba Africa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mejuputa nnukwu ọrụ itoolu gbasara ahụike, ibelata ịda ogbenye, ịzụ ahịa, itinye ego, mmepụta ihe ọhụrụ dijitalụ, mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ịmepụta ikike, mgbanwe omenala na nchekwa, ọ gbakwụnyere.
Kemgbe e guzobere FOCAC, ụlọ ọrụ ndị China ejirila ego dị iche iche nyere mba Africa aka iwulite ma kwalite ụgbọ okporo ígwè karịrị 10,000 km, okporo ụzọ okporo ụzọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1,000 àkwà mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri 100, na 66,000 km nke nnyefe na nkesa ọkụ eletrik. na akwụkwọ ọcha akpọrọ "China na Africa in the New Era: Partnership of Equals" ewepụtara na Fraịde.
Iwulite obodo China-Afrịka nwere oke ọdịnihu
N'afọ a bụ ncheta afọ 65 nke mmalite mmekọrịta mba ụwa n'etiti China na mba Africa.
N'ịkwado mmụọ ọbụbụenyi na imekọ ihe ọnụ nke China na Africa, Xi kwuru na ọ na-egosipụta ahụmịhe akụkụ abụọ ahụ nwere n'ịkekọrịta oke na ahụhụ ma na-ejekwa ozi dị ka isi iyi ike maka ịkwalite mmekọrịta China na Africa.
N'ime afọ 65 gara aga, China na Afrịka ewepụtala ụmụnne na-enweghị ike imebi n'ọgụ megide ọchịchị alaeze ukwu na ọchịchị colonial, ma malite n'ụzọ dị iche iche nke imekọ ihe ọnụ na njem na mmepe mmepe, ka o kwuru.
"Anyị ọnụ, anyị edeela isiakwụkwọ mara mma nke enyemaka n'etiti mgbanwe mgbagwoju anya, ma setịpụ ihe atụ na-egbuke egbuke maka iwulite ụdị mmekọrịta mba ụwa ọhụrụ," ka o kwuru.
Xi kwuputara ụkpụrụ nke amụma Africa nke China: ezi obi, ezigbo nsonaazụ, ịhụnanya na ezi okwukwe, na ịchụso ọdịmma ka ukwuu na ọdịmma.
Na ntinye nke ma mba China na mba Africa, FOCAC ka eweputara na ogbako ogbako nke mbu na Beijing n'October 2000, na ebum n'obi nke ịzaghachi ihe ịma aka ndị na-apụta site na ijikọ ụwa ọnụ akụ na ụba na ịchọ mmepe obodo.
FOCAC nwere ugbu a ndị otu 55, nke gụnyere China, mba 53 nke Africa nwere mmekọrịta mba na China na AU Commission.